यदि तपाईं रोमाञ्चक र खतरनाक साहसिक मनपर्छ र खेल्न मनपर्छ Microgaming स्लट खेलहरू हामी अत्यधिक सुझाव दिन्छौं जुरासिक विश्व स्लॉट! एउटै नामको साथ अविश्वसनीय विज्ञान-फिक्शन चलचित्रको आधारमा, जुन 2015 मा रिलीज भएको थियो, जुरासिक विश्व भिडियो स्लट तपाईंलाई इस्ला नबलबारमा पठाइनेछ, जहाँ डायनासोर नियन्त्रणमा परे। माइक्रोगाइमले जुन जून 2017 बाट अविश्वसनीय अभियान अनुभव गर्न प्रस्ताव गर्दछ। अचम्मको डिजाइन गरिएको खेलमा3पङ्क्तिहरू छन्,5रिल्सहरू, र 243 तरिकाहरू जित्न सुविधाहरू। जुरासिक विश्व कैसीनो मुक्त स्लट खेल्दै विशाल पूर्व-ऐतिहासिक रित्तोहरू बीच बाँच्न प्रयास गर्नुहोस् र इस्ला नबलबारको अचम्मको धन पाउनुहोस्!
डायनासोर र विन बीच बाँच्नुहोस्!
जुरासिक विश्व कैसीनो स्लट तपाईंलाई विभिन्न आकर्षक विशेषताहरु संग प्रभावित गर्नेछ। तिनीहरूमध्ये अनियमित रूपमा सुरु हुनेछ र अन्यहरूलाई विशेष चिन्हहरूलाई सक्रिय गर्न आवश्यक पर्दछ। यहाँ उनीहरूको छोटो विवरण हो।
टी-रेक्स - फ्रान्जिजको यो लोगो जुरासिक विश्व कैसीनो स्लॉटमा जंगली प्रतीकका कार्यहरू प्रदर्शन गर्न विकासकर्ताहरूले रोजिएको थियो। यो प्रतिमासँग कुनै अन्य प्रतिमा तर अम्बरको रूपमा कार्य गर्ने शक्ति छ।
एम्बर - यदि रिल्समा अम्बरको दुई टुक्राहरू हुन्छन् भने तिनीहरू अतिरिक्त जंगली हुन्छन्।3वा एम्बर को अधिक टुक्रा खेल बोर्ड मा भर दिए को उपयोग गरेर तपाईं3मुक्त स्पिन सुविधाहरु को शुरू गर्न सक्छन्। सुविधाहरू 15th सुरूवात सम्म अनियमित रूपमा सुरु गरिनेछ। यसको पछि, तपाईं आफ्नो लागि चाहानु भएको कुनै पनि सुविधा रोज्न सक्नुहुन्छ। Gyrosphere घाटी प्ले गर्न 10 नि: शुल्क स्पिनहरू। प्रत्येक दौर, जसले पुरस्कार ल्याएन, 1 द्वारा गुणक वृद्धि गर्नुहोस्। विजय पछि, गुणक x1 मा रिसेट हुनेछ। Raptor डेन बोनस प्ले गर्दै तपाईंले 10 स्पिन पाउनुहुनेछ। सबै एम्बर प्रतीक जंगली को रूप मा कार्य गर्दछ। यदि एक वा दुई एम्बर छविहरू स्क्रिनमा उडान गर्दछ भने, तिनीहरू नयाँ एम्बर टुक्राहरू देखा पर्दा बन्द हुनेछन्।3वा अधिक एम्बर आइकनले5थप स्पिनहरू प्रदान गर्दछ। यदि सिर्जना ल्याब सुविधा सुरू भएको छ भने तपाईले 10 निःशुल्क स्पिन प्राप्त गर्नुहुनेछ। जित्ने चिनो रेखाहरू बनाइएका आइकनहरू, खेल बोर्डबाट हटाइएका छन् र नयाँहरूले तिनीहरूको स्थानहरू लिनेछन्। कुनै पनि जंगली रिलिज मा उचाई3स्पिन को लागि यसको स्थान मा रहनेछ।
इन्ण्डोमस रक्स सुविधा आधार आधारमा कुनै स्पिनमा प्रारम्भ गर्न सकिन्छ। भयानक रित्तो अचानक स्क्रिनमा देखा पर्दछ जुन X1.000 गुणक तपाईंको वर्तमान पुरस्कारमा आवेदन गर्दछ!
🎁 सर्वश्रेष्ठ कुनै जम्मा कैसीनो बोनस कोड:
???? 30% क्यासिनो म्याच बोनस
???? 500% जम्मा जमा बोनस
???? 540% म्याच बोनस क्यासिनो
💵 $ 475 कैसीनो टूर्नामेंट freeroll
💵 EUR 295 नि: शुल्क कैश
💵 EURO 175 फ्री कैसीनो चिप
💵 $ 60 मुक्त चिप क्यासिनो
💵 $ 305 NO DEPOSIT BONUS CODE
💵 785% पहिलो जम्मा बोनस
💵 $ 615 फ्री कैसीनो टिकट
💵 £ 730 जम्मा रकम बोनस छैन
💵 $ 255 फ्री कैसीनो चिप
💵 EUR 1010 जम्मा छैन
💵 यूरो 655 मोबाइल फ्रीरोल स्लट टूर्नामेंट
💵 € 1935 जम्मा बोनस कोड
💵 पाउन्ड 830 अनलाइन क्यासिनो टूर्नामेंट
💵 60 नि: शुल्क जम्मा कुनै जम्मा कैसीनो छैन
💵 $ 60 फ्री कैसीनो चिप
💵 पाउन्ड 255 नि: शुल्क पैसा
💵 $ 3785 NO DEPOSIT BONUS CODE
💵 £ 3400 NO DEPOSIT CASINO बोनस
💵 $ 590 फ्री कैसीनो टिकट
💵 55% स्वागत बोनस
💵 € 2660 NO DEPOSIT CASINO बोनस
💵 € 960 टूर्नामेंट
💵 710% स्वागत बोनस
💵 EUR 175 नि: शुल्क कैश
💵 EUR 295 फ्री कैसीनो टूर्नामेंट
💵 यूरो 4610 कुनै जम्मा बोनस कैसीनो छैन
💵 280% स्वागत बोनस
💵 15 फ्री स्पिन क्यासिनो
💵 $ 2395 कुनै जम्मा रकम छैन
💵 यूरो 505 नि: शुल्क नगद
💵 € 310 नि: शुल्क कैश
💵 735% साइन अप कैसीनो बोनस
💵 पाउन्ड 305 निःशुल्क चिप कैसीनो
💵 $ 930 कुनै जम्मा बोनस
💵 $ 500 नि: शुल्क चिप
💵 EUR 33 क्यासिनो टूर्नामेंट
💵 € 490 मुक्त चिप कैसीनो
💵 € 2860 जम्मा छैन
💵 € 410 फ्री कैसीनो चिप
💵 £ 4575 जम्मा रकम बोनस कोड
💵 EUR 880 क्यासिनो टूर्नामेंट
💵 $ 3405 जम्मा बोनस कोड छैन
💵 30% क्यासिनो म्याच बोनस
💵 $ 333 मुक्त क्यासिनो चिप
💵 $ 140 कैसीनो टूर्नामेंट freeroll
💵 € 4500 no deposit bonus casino
💵 $ 75 मोबाइल फ्रीरोल स्लट टूर्नामेंट
💵 11 फ्री स्पिन कुनै जम्मा कैसीनो छैन
💵 565% उत्तम साइनअप बोनस कैसीनो
💵 $ 100 निःशुल्क चिप
💵 245 फ्री स्पिन कुनै जम्मा कैसीनो छैन
💵 $ 785 जम्मा छैन
💵 € 160 no deposit bonus
💵 600% बोनसस क्यासिनो
💵 465% कुनै नियम बोनस!
💵 $ 1335 NO DEPOSIT BONUS
💵 यूरो 60 मोबाइल फ्रीरोल स्लट टूर्नामेंट
💵 755% म्याच बोनस क्यासिनो
💵 $ 370 क्यासिनो टूर्नामेंट
💵 € 495 फ्री कैसीनो टूर्नामेंट
💵 EUR 1590 कुनै जम्मा कैसीनो बोनस छैन
💵 495% साइन अप कैसीनो बोनस
जुरासिक संसार अपडेट गरिएको: जनवरी 29, 2019 लेखक: आमिर Berrey
1 जुरासिक संसार
2 🎁 सर्वश्रेष्ठ कुनै जम्मा कैसीनो बोनस कोड:
3.0.0.0.1 फलफूल बनाम कैंडी
3.0.0.0.2 प्यास कारखाना
3.0.0.0.3 जैकपोट जेटर 50k
3.0.0.0.4 मध्यस्थ को ओलिम्पस बदला मा
3.0.0.0.5 सुपर खजाना पार्टी
3.0.0.0.10 बोनस बलिङ
3.0.0.0.11 लिटिल ब्रिटन
3.0.0.0.12 टेनिस ताराहरू
3.0.0.0.14 छिटै शूटर लूटर सुन
3.0.0.0.15 जैकपोट पोकर
3.0.0.0.16 म्यान्चेस्टर युनाइटेड
3.0.0.0.18 सूर्यको यात्रा
3.0.0.0.19 भूत सवार खरिद
3.0.0.0.20 एजटेक साम्राज्य
3.0.0.0.21 सुँगुर भाग्यशाली
3.0.0.0.22 Berryburst अधिकतम